Semalt वर्णन गर्दछ कसरी वेब कथाहरूले भित्री ट्राफिक सुधार गर्न सक्दछन्
गुगलले वेब कथाहरूको पहुँच र प्रभावहरू सुधार गर्ने योजना बनाइरहेको हुन सक्छ यदि अधिक साइट मालिकहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सुरू गरे भने। वेब कथाहरू अपनाउने सुविधाका लागि, गुगलले यसको AMP कहानी ढाँचा पुनःब्रेन्ड गरेको छ, यसलाई अझ राम्रो, अधिक रमाईलो र आकर्षक बनाउँदै।
Semalt मा, हामी यी कथाहरूको महत्त्व बुझ्छौं। तिनीहरू केवल अतिरिक्त कुञ्जी शब्दहरू राख्ने उपकरण मात्र होइनन्, तर उनीहरूका लागि तिनीहरू सुनका खान पनि हुन् जसले वास्तवमै यसको सुविधाहरूको सम्भावित फाइदाहरू बुझ्दछन्। वेब कथाहरूले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्रीका माध्यमबाट ब्रान्डसँग जडान हुने अनुपम अवसर प्रदान गर्दछ जुन अधिक मैत्री र व्यक्तिगत हो।
आज, हामीले देख्यौं "कहानी" सुविधा धेरै सामाजिक मिडिया नेटवर्कमा स्वीकृत हुन। हामी तिनीहरूलाई गुगलमा प्रथम श्रेणीका नागरिकहरू मान्न सक्छौं।
गुगल वेब कथाहरू के हुन्?
यी छोटो दृश्य स्लाइडशो-शैलीयुक्त सामग्रीहरू फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम र हालसालै ट्विटरमा कहानी सुविधा मिल्दोजुल्दो छ। गुगलले आधिकारिक रूपमा वर्डप्रेसको लागि आधिकारिक स्टोरी प्लगइन जारी गर्‍यो, जसले वेबसाइट प्लेट मालिकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूमा कथाहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। हामी यसलाई महत्त्वपूर्ण विकासको रूपमा फेला पार्दछौं, विशेष गरी किनभने पोष्टहरू मुद्रीकरण गरिएका छैनन्, पोष्टहरू जस्तो। यसले कथालाई लिने बनाउनलाई सजिलो बनाउँदछ। वेबसाइटमा फिचर गरिएको पोष्टहरूका लागि मैत्री टीज़र। यस लेखमा, हामी तपाइँलाई तपाइँ तपाइँको वेबसाइट कथाहरू छोटो र सरल राख्न सक्नुहुन्छ कसरी देखाउने छौं।
कथालाई छोटो र आकर्षक भिडियो वा छविहरूको श्रृंखलाको रूपमा सोच्नुहोस् स्लाइड शोको रूपमा व्यवस्थित जसलाई प्रयोगकर्ताहरू फ्लिप गर्न र बुझ्न सक्दछन्। एउटा साधारण अभ्यास भनेको यस कथाको अन्त्यमा कल टु एक्शन समावेश गर्नु हो जुन तपाईंको दर्शकलाई पूरा पोष्ट पढ्न प्रोत्साहित गर्दछ। यो एक अद्वितीय विज्ञापन माध्यम हो जुन तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ।
तपाईंको वेबसाइटमा पाठहरू वा भिडियोहरूको लम्पहरू भएको कल्पना गर्नुहोस्, र तपाईंलाई यस सामग्रीले बोक्ने जानकारीको वर्णन गर्न मार्ग आवश्यक छ। कथाहरूको साथ, तपाईं भिडियोको सब भन्दा चाखलाग्दो अंशहरू लिन सक्नुहुन्छ र स्निपेट्सको रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक जब यी कथाहरू दर्शकहरू आउँछन्, तिनीहरू चासो राख्छन् र भिडियो हेर्ने निर्णय गर्छन्। उही विचारधारा लागू हुन्छ जब कथाहरू उत्पादन, सामग्री, आदि विज्ञापन गर्न प्रयोग गर्दा।
कसरी वेब कथाहरू बनाउने
वेब कथाहरू कुनै सुविधाहरू होइन जुन प्रत्येक प्रकारको वेबसाइटको लागि उपलब्ध छ। यस समयमा वेब कथाहरू वेबसाइटहरूमा लक्षित छन् जुन WordPress द्वारा संचालित छन्। गुगलले आधिकारिक रूपमा वर्डप्रेस आधारित वेबसाइट को लागी एक वेब स्टोरी प्लगइन जारी गर्‍यो। यो प्लगइनले तपाईंलाई तपाइँको वेबसाइटमा कथाहरू फिचर गर्न सक्षम गर्दछ। प्लगइन प्रयोग गर्न आधारभूत छ; यो एक साधारण ड्र्याग एण्ड ड्रप ईन्टरफेस हो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न टेम्प्लेटको साथ आउँदछ।
एकचोटि ड्र्याग र ड्रप गर्न जुन तपाईंलाई तपाईंको कथा जस्तो मनपर्दछ, प्लगइनले नयाँ वेब कहानी कस्टम पोस्ट सिर्जना गर्दछ जुन तपाईं प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
नोट: यो गर्नाले तपाईको कथा तपाईको होमपेज फिडमा देखा पर्दैन।
अर्को प्रश्न हो, जहाँ तपाईंको दर्शकहरूले यो कथा फेला पार्न सक्षम हुनेछन्, र तपाईं कसरी यसमा ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ?
व्यक्तिलाई तपाइँको वेब कथाहरू हेर्नका लागि
यहाँ, हामी माथि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनेछौं। वेब कथाहरू WordPress मा विशेष मिनी पृष्ठहरूमा अवस्थितको लागि डिजाइन गरिएको छ। यसको मतलव तपाईले आफैलाई ईम्बेड वा ट्र्याफिक पठाउनु पर्दैन। किनभने यो वेब कथाहरू मुद्रीकरण गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छैन साथै विशिष्ट ब्लग पोष्टहरू पनि। यसको सट्टामा, यी कथाहरूले ब्लग पोष्टमा सेवा र स्निपेट्स प्रदान गर्दछ। यस कारणका लागि, तपाईं आफ्ना कथाहरूसँग अचाक्ली ईमान्दार हुन चाहनुहुन्न र तपाईंको ब्लगबाट तपाईंको कथाहरूमा ट्राफिक डायभर्ट गर्ने कार्य समाप्त हुनुहुन्न। यो यसको कारण हो; हामी प्राय: वेब कथाहरू सम्मिलित गर्न सिफारिस गर्दैनौं।
वेब कथाहरूको एउटा प्राथमिक लक्ष्य हुन्छ, जुन सकेसम्म धेरै आगन्तुकहरूलाई Google डिस्कवरीबाट मूल पोष्टहरूमा ल्याउनको लागि हो, त्यसैले यो सधैं सीटीए हुन्छ र अन्तमा मूल पोस्टमा हाइपरलिंक हुन्छ।
यदि यस्तो कुरा जस्तो लाग्छ भने तपाइँ प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ हामी कसरी वेब कथाहरू अप्टिमाइज गर्छौं र तपाईंको लक्षित श्रोताको लागि उनीहरूलाई अपील गर्ने एक गाईड यहाँ छ।
कसरी उत्कृष्ट वेब कथाहरू सिर्जना गर्ने
शीर्ष पोष्टहरूका लागि कथाहरू सिर्जना गर्नुहोस् पहिले
यो प्रतिरोधात्मक लाग्न सक्छ, विशेष गरी किनभने तपाईं आफ्नो भर्खरको सामग्री विज्ञापन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि विश्वास गर्नुहोस्, हामीले यो सुविधा प्रयोग गर्‍यौं, र हामी यसको सिफारिस गर्दैनौं यदि यसलाई साच्चिकै फाइदाहरू भएन भने।
शीर्ष पोष्टको लागि वेब कथाहरू सिर्जना गर्नु उस्तै रणनीति हो जुन तपाइँको साइटको शीर्ष पोष्टहरूका लागि एक રેસिपी कार्ड वा भिडियो बनाउनु हो। सबै प्राविधिकताको पछाडि, तपाइँ केवल तपाइँको उत्तम सामग्रीको लागि विज्ञापन बनाउँदै हुनुहुन्छ।
यो गर्नाले दुई फाइदाहरू हुन्छन्, पहिलो यो हो कि तपाई वेब कथाहरूमा राम्रो र्या rank्कन गर्नुहुन्छ र दोस्रो कारण यो हो कि यो नयाँ फिचर हो जसमा वेबसाइटहरूले गुगललाई तिनीहरूको दक्षता प्रदर्शन गर्न सक्दछन्।
गुगल डिस्कवरीबाट प्रदान गरिएको अतिरिक्त यातायात तपाईं जैविक SERP रैंकिंगबाट मात्र उत्पन्न ट्राफिक भन्दा बढी हो। अधिक इनबाउन्ड यातायात, राम्रो छ। पहिले, अझ राम्रो, र प्रकाशकहरू जसले पहिले नै वेब कथाहरूको परिणामहरू हेरिरहेका छन्।
हामी सिफारिस गर्छौं कि ब्लगर वा ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु आफ्नो शीर्ष कथाहरु र उत्पादनहरु को लागी कथाहरु बनाउन। धेरैले यो बुझ्न असफल हुन्छन् कि यदि तपाईंले सही गर्नुभयो भने वेब कथाहरूबाट एक दिन २०,००० क्लिकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले कथाहरूबाट एक महिनामा कूल ,000०,००० क्लिकहरू उत्पादन गर्ने कथाहरू साझेदारी गरेका छन्।
पोष्टहरूमा एम्बेड स्टोरीहरू नगर्नुहोस्
गुगलले सल्लाह दिन्छ कि तपाईले आफ्ना पोष्टहरूमा एम्बेड गर्नुहोला, तर यस सिफारिस संग केहि चुनौतीहरू छन्। पहिलो समस्या वेबसाइटहरू उनीहरूको पोष्टमा एम्बेड गरेर कथाहरू हुन्: यो पृष्ठ ढिलो हुन्छ। थप रूपमा, कथाहरू यसको इष्टतम तरिकामा सिर्जना गर्दा उनीहरू दुबै प्रयोगकर्ता अनुभव र विज्ञापन मुद्रीकरण सुधार गर्न सहयोग गर्दछ सामग्री कन्टेजका रूपमा उनीहरूलाई बनाएर। यस कारणले गर्दा, सामग्रीलाई आफैंमा कथा राख्नु कुनै अर्थ राख्दैन।
अन्तमा, आधिकारिक WordPress प्लगइन प्रयोग गर्दा, तपाईं आफ्नो साइट मा प्रत्येक कहानी को लागी एक Permalink र यसको अवसर को लागी प्राप्त। तिनीहरू श्रेणी गर्न सक्षम हुन इम्बेड गर्न आवश्यक छैन।
तपाईंको वेब स्टोरीमा लिंक गर्नुहोस्
गुगलले सिफारिस पनि गरेको छ कि हामी गहिराइसँग एकीकृत कथाहरू प्रयोग गर्दछौं जुन ती तरिकाले तपाईंको होमपेज वा प्रासंगिक कोटी पृष्ठहरूबाट लिinking्क गर्नमा प्रयोग गर्दछ। यो तपाईंको लागि राम्रो छ, विशेष गरी जब तपाईंसँग लगातार होमपेज वा कोटी पृष्ठहरू छन्। त्यो किनभने यो अनौंठो सामग्री थप्न को लागी सरल छ।
मानौं तपाईंसँग श्रेणिहरू बाट लिंक गर्न वा एकैचोटि धेरै कथाहरू हुनबाट जोगिन सजिलो तरीका छैन। जैविक खोजीको साथ, गुगलले अझै पनि यो जान्न कोशिस गरिरहेको छ कि कसरी कथाहरू यसका प्रयोगकर्ताहरूसँग कसरी बाह्य र आन्तरिक लिंकहरूमा जान्छन् अन्तर्क्रिया गर्दछ। तपाइँको कथा पनि तपाइँ छेड्दै गरेको सामग्रीसँग धेरै मिल्दो हुनेछ। तपाईंको पोष्टहरूबाट कथाहरू लिंक गरेर, तपाईं Google लाई सजीलो बनाउन को लागी तिनीहरूलाई एम्बेडिंग को बेफाइदा बिना पाउन।
तपाइँको वेब कथाहरू ल्यान्डि Page पृष्ठमा जोड्न
गुगलले सल्लाह दिन्छ कि पेशेवरहरूले उनीहरूको अवतरण पृष्ठको लागि छुट्टै कथाहरू बनाउँदछन्, जुन तपाईंको सबै वेब कथाहरूको लिंकहरू प्रस्तुत गर्दछ। यसबाट, तपाईं यसलाई तपाईंको गृहपृष्ठबाट ल्यान्डि page पृष्ठमा लिंक गर्नुहोस्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यो कार्यलाई WordPress द्वारा प्रदान गरिएको पूर्वनिर्धारित अवतरण पृष्ठको साथ गर्नुहोस्। संभावना यो छ कि यो तपाईंलाई मन परेको जस्तो राम्रो छैन, तर यसले पक्कै तपाईंलाई लिंकहरू प्राप्त गर्दछ। यसको कारणले गर्दा, हामी यस पृष्ठलाई साइडबारमा लि to्क गर्ने प्रयास गर्दछौं किनकि यो तपाईंको शीर्ष नेभिगेसन भन्दा कम प्रचलित छ, तर यो अझै अपेक्षित प्रदर्शन गर्नको लागि पर्याप्त देखिने छ।
यहाँ लक्ष्य भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईका कथाहरू गृह पृष्ठबाट दुई क्लिकहरू टाढा छन्।
तपाईंको वेब स्टोरी XML साइटम्याप सबमिट गर्नुहोस्
यदि तपाईं XML साइटम्यापहरू उत्पन्न गर्न Yoast प्लगइन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई वेब कथाहरूको लागि पनि एक सल्लाह दिन्छौं। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको एसईओ प्लगइनहरू तिनीहरूलाई उत्पन्न गर्न को लागी कन्फिगर गरिएको छ र गुगल सर्च कन्सोल मार्फत बुझाउनुहोस्।
तपाईंको वेब कथाहरू नामकरण गर्दै
यो एक ट्रिकिष्ट कार्यहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले सुरु गर्नुभएको वेब वेब स्टोरी बनाउँदा। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो वेब कहानी पृष्ठ शीर्षक अप्टिमाइज गर्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटमा नक्कल पृष्ठ शीर्षक सिर्जना नगर्न याद गर्नुहोस्। एउटा साधारण समाधान भनेको उही शीर्षक प्रयोग गर्नु हो तर यसको शीर्षकमा "कहानी" समावेश गर्दछ। यससँग, तपाईं तपाईंको सबै शीर्ष पोस्टहरू र आगामी पोष्टहरूका लागि कथाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ अप्टिमाइजेटेड शीर्षकको लागि ब्रेस्टस्ट्रम बिना।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, Semalt तपाइँको वेबसाइटलाई सबै पक्षहरुमा सुधार गर्न मद्दत गर्न यहाँ छ। यस कारणका लागि, हामी जहिले पनि SEO प्रविधिको पछिल्ला घटनाहरूको बराबरीमा हुन्छौं। हामी तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्ने बेलामा तपाइँको प्रतिस्पर्धाको अगाडि रहनको लागि सबैभन्दा उत्तम र सुरक्षित तरिकाहरू ड्राफ्ट गर्न यी प्रक्रियाहरूसँग प्रयोग गर्न हामी सँधै सावधान हुन्छौं।